यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि पिप्पली खानुका फाइदाहरु, जानी राखौ
नोभेम्बर 10, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment	पीप्पली, स्वास्थ्य
पीप्पलीलाई (Long Pepper) भन्दछन् । यसको फाइदाबारे अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्छ । आज मैले यसका फाइदाहरु र बेफाइदाहरुबारे प्रकाश पार्नेछु । हाम्रो बारमा यो लहराको रूपमा फलेको हुन्छ । कतिपयले यसलाई प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । स्वादमा मरौठी टाइपको परपराउने हुन्छ ।
पिप्पलीका थुप्रै फाइदाहरू छन् । यदि हामीले यसलाई सहि तरिकाले प्रयोग गर्न सकेमा राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ । पिप्पली जडिबुटी अन्तर्गत पर्दछ । यो नेपालमा प्रशस्त पाइने जडिबुटीमध्ये एक हो । यसलाई लेटिनमा Piper Longum, Linn भन्दछन् ।
१. पिप्पलीको प्रयोगबाट शरिरमा भएको फैटी एसिड हटाएर मोटोपना कम गराउन राम्रो भुमिका खेल्दछ । मोटोपनाबाट आफुलाई बचाउन चाहना भएमा पिप्पलीलाई महसंग मिलाएर नियमित सेवन गर्नु पर्दछ ।
३. पिप्पलीको प्रयोग मधुमेहमा गर्नाले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा कम गराउन राम्रो भुमिका खेल्दछ ।
← यस्तो छ दादको अनुभुत उपचार, जानी राखौ
आयुर्वेदिक जडिबुटीबाट यसरी तयार गर्नुहोस् जुकाको औषधि →
डिसेम्बर 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2
One thought on “स्वास्थ्यको लागि पिप्पली खानुका फाइदाहरु”
Pingback:	यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि भेली खानुका फाइदाहरु, जानी राखौ